ရုရှားအစိုးရသည် Google ၊ Facebook နှင့် Apple တို့ကဲ့သို့သောနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများထံမှ Digital Tax ကောက်ခံရန်စဉ်းစားနေ. ~ Myanmar Online News
ရုရှားအစိုးရသည် Google ၊ Facebook နှင့် Apple တို့ကဲ့သို့သောနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများထံမှ Digital Tax ကောက်ခံရန်စဉ်းစားနေ.
3:32 AM နည်းပညာ, နိုင်ငံတကာသတင်း No comments
ရုရှားနိုင်ငံသည် နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများအား မူလကဝင်ငွေခွန်တစ်မျိုးတည်းသာ ကောက်ခံခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံအတွင်း၌ ဒီဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေသည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများကို ထပ်ဆောင်းခွန် (Value Added Tax- VAT) ၂၀% စတင်ကောက်ခံခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် Google အပါအဝင် နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများအပေါ်၌ Digital Tax ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်အမျိုးအစားသစ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ ကောက်ခံနေပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တစ်နှစ်တာကာလအတွက် Digital Tax ကောက်ခံခြင်းမှယူရိုငွေ (၅၀၀) သန်းခန့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဗြိတိန်အပါအဝင်အခြားဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံနည်းတူ Digital Taxများကိုကောက်ခံရန်စီစဉ်လာခဲ့ပြီးရုရှားနိုင်ငံသည်လည်း Digital Tax ကိုစတင်ကောက်ခံရန် ပြင်ဆင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
#Myanmar_Online_News #ရုရှားအစိုးရ #Google #Facebook #Apple #Digital_Tax
#Myanmar_Online_News #႐ုရွားအစိုးရ #Google #Facebook #Apple #Digital_Tax